၂၀၁၈ မတ်လရဲ့ ရောင်းအားအခြေအနေကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့ Nissan နဲ့ INFINITI! – AutoMyanmar
၂၀၁၈ မတ်လရဲ့ ရောင်းအားအခြေအနေကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့ Nissan နဲ့ INFINITI!
Nissan နဲ့ INFINITI တို့ဟာ ၂၀၁၈ မတ်လအတွက် သူတို့ရဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာ ရောင်းအားရလဒ်အခြေအနေကိုဖော်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Nissan ဟာ ၂၀၁၈ မတ်လမှာ ၁၄၅,၁၀၃ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး INFINITI ကတော့ ၁၇,၄၃၂ စီးရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Nissan, INFINITI အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုပေါင်းရလဒ်ဟာ ၁၆၂,၅၃၅ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အရင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကရောင်းအားနဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ ၄ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကျဆင်းသွားပါတယ်။
Sales result for Nissan and INFINITI
Nissan ဘက်မှာ ရောင်းအားရလဒ်အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ ကားတွေကတော့ Rouge, Armada, Frontier, Sentra တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
– Nissan Rouge ဟာဆိုရင် ၂၀၁၈ မတ်လမှာပဲ ၄၂,၁၅၁ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးအရင် ၂၀၁၇ ကထက် ၇ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
– Nissan Armada ကတော့ မတ်လအတွင်းမှာပဲ ၄,၂၈၈ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကထက် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးအထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
– Nissan Frontier ကိုဆိုရင် ၈,၉၃၂ စီးအထိရောင်းချနိုင်ပြီး အရင်နှစ်ကထက် ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရောင်းအားမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
– Nissan Sentra ဟာတော့ ၂၅,၁၂၃ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ကထက် ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ အသီးအသီးရောင်းအားတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနည်းတူ INFINITI ဘက်မှာလည်း QX50, Q50, QX80 တို့ကရောင်းအားအခြေအနေကောင်းနေပြန်ပါတယ်။
– INFINITI 2019 Q50 ဟာဆိုရင် Luxury Crossover ပုံစံမျိုးနဲ့ မတ်လအစမှာ စတင်ဖြန့်ချီခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် တစ်လအတွင်း ၅,၀၈၅ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်နှစ်ကထက်ရောင်းအားအခြေအနေ ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
– INFINITI QX50 ကတော့ Sport Sedan အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မတ်လအတွင်းမှာပဲ ၁,၉၁၃ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင် ၂၀၁၇ ကထက် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းအထိရောင်းအားအခြေအနေမြင့်တက်လာပါတယ်။
– Full-size SUV အမျိုးအစား INFINITI QX80 ဟာတော့ ၂၀၁၈ မတ်လအတွင်းမှာပဲ ၂,၀၈၀ စီးအထိရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရင်နှစ်ကထက် ၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရောင်းအားအခြေအနေ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ Nissan နဲ့ INFINITI တို့ကတရားဝင်ဖော်ပြထားတဲ့ ၂၀၁၈ မတ်လအတွက်ရောင်းအားအခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကားအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ရောင်းအားအခြေအနေ အသေးစိတ်ကိုတော့ Nissan.com မှတဆင့်သွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။
Infiniti, Month of Sales, Nissan